လောကမှာ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ဆီကို ရောက်ရှိဖို့အတွက် Self Confidence ခေါ်တဲ့ မိမိကိုယ် မိမိယုံကြည်မှု ရှိဖို့က အရေး ကြီးဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကိုတောင် ယုံကြည်မှုမရှိခဲ့ရင် တစ်ပါးသူက ကိုယ့်ကို ယုံကြည်ဖို့ ဆိုတာ ခဲယဉ်းပါတယ်။ ကိုယ့်ကို ကိုယ်ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိမှသာ အရာရာတိုင်းမှာ အောင်မြင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူဆိုတာ တစ်သက်မှာ တစ်ခါတော့ ကံကောင်းလေ့ ရှိပါတယ်။ ကံကောင်းခြင်းတရား ရောက်လာချိန်မှာ အခွင့်အရေးကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်ဖို့၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှု မရှိတဲ့အခါ လက်လွတ် ဆုံးရှုံးရတတ်ပါတယ်။
မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိဖို့ ဘာတွေလိုအပ်သလဲ။ အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့် အတတ်ပညာ၊ အရင်းအနှီး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာတွ်ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အတတ်ပညာ ဆိုတာ ဘယ်လိုလဲ။ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ကျွမ်းကျင်တာ၊ ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို ပိုင်နိုင်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်တာ အတတ်ပညာကောင်း တစ်ခုပါပဲ။ ဘုရားဟောတဲ့ အထဲမှာ မိမိအတတ်ပညာနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုခြင်းဟာ မွန်မြတ်သော ရှင်သန်ခြင်းလို့ ဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ဖိနပ်ချုပ်တဲ့လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါစေ၊ သမ္မာအာဇီဝလုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်တာမို့ ကိုယ့်ဘဝ အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့အတွက် အထောက်အပံ့ကောင်း တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ပညာလို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ သက်မွေးကျောင်းပညာ တစ်ခုလောက်တော့ အနည်းဆုံး တတ်ထားသင့်ပါတယ်။ ခပ်များများ တတ်ထားလည်း မမှားတာမို့ ပညာကို အချိန်ရှိခိုက် လေ့လာဆည်းပူး သင်ယူသင့်ပါတယ်။
အရင်းအနှီးဆိုတာမှာ ငွေကြေးအရင်းအနှီး နဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာ အရင်းအနှီးပေါ့။ ငွေကြေးက အနည်းငယ်လောက်ဆိုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထမင်းဆိုင် ဖွင့်ချင်သူက ထမင်းအိုး၊ ဟင်းအိုး၊ ခွက် ယောက်ထိုင်ခုံတွေ လိုအပ်တာပေါ့။ ဓါတ်ပုံဆရာက ကင်မရာ ကောင်းကောင်းတစ်လုံးလောက် တော့ အနည်းဆုံး လိုအပ်တာပေါ့။ ကိုယ့်မှာ ပစ္စည်းကောင်းကောင်း ရှိထားတာနဲ့အမျှ ကိ်ုယ့်လုပ် ငန်းမှာ ယုံကြည်မှု မြင့်တက်စေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းက အရည်အသွေး ကောင်းလေလေ၊ ပြည့်စုံမှု ရှိလေလေ ကိုယ့်ရဲ့ ယုံကြည်မှုက မြင့်လေလေပဲ။
ဒါတွေက စိတ်ဓါတ်ခွန်အားနဲ့ မဆိုင်သေးဘူး။ အပေါ်ယံ အကြမ်းဖျဉ်းလောက် ပြောတာပါ။ ဆိုလိုတာက ဒီအချက်တွေဟာ ကြိုးစားလိုက်တာနဲ့ လူတိုင်းမှာ ပြည့်စုံနိုင်တယ်။ နောက်ထပ် လို အပ်တာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ကလျာဏမိတ္တ လို့ ခေါ်တဲ့ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း၊ အာစရိယ လို့ ခေါ်တဲ့ ဆရာသမားကောင်းတွေ ပါပဲ။ ဆရာသမား နဲ့ မိတ်ဆွေကောင်း ဆိုတာ ကောင်းရာကို လမ်းညွှန်ပြသပြီး၊ မကောင်းရာကို တားမြစ်တဲ့အတွက် ပစ္စုပ္ပန် သာမက သံသရာကောင်းကျိုးကိုပါ ပေးတတ်လို့ ဖြစ်ပါ တယ်။
ယုံကြည်မှု ရှိသူတွေ လုပ်တတ်တဲ့ အမူအကျင့်တွေကို အနည်းငယ် ဖော်ပြပါမယ်။
(၁) ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်တတ်
ယုံကြည်မှု ရှိတဲ့သူတွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင် အထင်အမြင် အ ယူအဆတွေကို ဂရုမစိုက်တတ်ဘူး။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက်ပဲ လှောင်ပြောင်နေပါစေ၊ ကိုယ်လုပ်မယ် ဆိုတဲ့ အရာတွေကို ဖြစ် အောင် လုပ်တယ်။
အပြန်အလှန်အားဖြင့် ယုံကြည်မှု မရှိတဲ့သူတွေဟာ သူများ တွေ အမြင်တွေကို ဂရုစိုက်တတ်တယ်။ သူများ ဆိုတဲ့ အမြင်တွေက ကိုယ့်ဘဝကို လွှမ်းမိုးထားတတ်တယ်။ သူများ အထင်အမြင်တွေပဲ ဂရုစိုက်ပါများလာတော့ ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါ မှားသွားမလား၊ တခုခု ပြောမလား ဆိုပြီးတော့ သူများအမြင်ကိုပဲ အာရုံစိုက်တယ်။ သူများ အမြင်ကိုပဲ အာရုံစိုက်လိုက်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အာရုံ စိုက်မှုက လုံးဝလျော့ကျသွားတာ ဖြစ်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့် လူရှေ့သူရှေ့ မထွက်ရဲတာ၊ ဓါတ်ပုံ မရိုက်ရဲတာ၊ အင်တာဗျူး မလုပ်ရဲတာ တွေပေါ့။
လူတိုင်းဟာ ကိုယ်သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ နေရာမှာနေရင် ပျော်လေ့ ရှိကြတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း ယုံကြည်မှု ရှိတဲ့သူတွေက အများနည်းတူ နေလေ့မရှိဘဲ အသစ်ကို ရှာဖွေကြတယ်။ နေရာသစ်၊ နယ်မြေသစ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်သစ်၊ အလုပ်အကိုင်သစ် တွေကို ရှာဖွေတတ်ကြတယ်။ စွန့်စားရတာ ကြိုက်တယ်။ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်တည်တတ်ကြတယ်။ ဥပမာ - နယ် ဝေးမှာ သွားနေတာမျိုး၊ တစ်ယောက်ထဲ ခရီးသွားတာမျိုး။
ယုံကြည်မှု မရှိသူတွေက ပုံသေနည်းအတိုင်း ဘဝကို ရှင်သန်တယ်။ Comfort Zone မှာ ပျော်နေတယ်။ သူတို့ဘဝမှာ ပြောင်းလဲမှု မရှိဘူး။ ဒီလူတွေနဲ့ပဲ တွေ့ရတာ များလာတော့ အသစ် တွေကို တွေ့ရမှာ ကြောက်တယ်။ လူသစ်တွေနဲ့ တွေ့ရင် ယုံကြည်မှု မရှိတော့ဘူး။
(၃) အမှားကို ဝန်ခံတတ်
ယုံကြည်မှု ရှိသူတွေက မှားတာကို ဝန်ခံတတ်တယ်။ အမှားကနေလည်း သင်ယူတတ်တယ်။ အမှားကို ဝန်ခံဖို့ဆိုတာ ပြောတာတော့ လွယ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ လူသားသန်းပေါင်း များစွာက တော်တော်များများ လုပ်လေ့လုပ်ထ မရှိကြဘူး။ ကိုယ် မှားပါတယ်ပြောဖို့ တအားရှက်ကြ တယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ပေါ့။ မှားတာကို ကာကွယ်ထားပြီးတော့ ဘယ်သူမှ မသိစေချင်ဘူး ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုမရှိတာကို ပြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မှားတာကို ဝန်ခံတတ်ရသလို မှားတာကိုလည်း တာဝန်ယူတတ်ရမယ်။ နိုင်ငံခြား ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ မှားတာကို ဝန်ခံတတ်ဖို့ သင်ယူကြရတယ်။
(၄) ယောနိသော မနသီကာရ (အကောင်းမြင်စိတ်)
အကောင်းမြင်တတ်တာဟာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဟောကြားတဲ့ မင်္ဂလာတရားတော်တွေထဲမှာ တစ်ခု အပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ အ ကောင်းမြင်တတ်တာဟာ ယုံကြည်မှု ရှိသူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်။
အဆိုးဘက် တအားမတွေးဘဲ အကောင်းဘက်ကို အမြဲတွေးတာ ယုံကြည်မှုရှိသူတွေအတွက် အလေ့အကျင့်ကောင်း တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူမဆို လေ့ကျင့်ယူလို့လည်း ရပါတယ်။ အမြဲတမ်း စိတ်ကို နိုးကြားစေပြီးတော့ လေ့ကျင့်နေမှ ဖြစ်မှာပါ။
(၅) ပုံတူ ကူးမချတတ်ဘူး။
ယုံကြည်မှု ဆိုတာ လွန်ကဲရင်လည်း မကောင်းပါဘူး။ ဘက် ခြေမျှတအောင် ချိန်ညှိလို့ ရပါတယ်။ ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းလို့ ရတဲ့ နည်းလမ်း ၃ ခု ရှိပါတယ်။
ကိုယ့်ဟာကိုယ် ယုံကြည်မှု ရှိလာလေလေ၊ အောင်မြင်မှုနဲ့ နီးလာလေလေ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ယုံကြည်မှု ကိုယ့်ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မှာပါ။
(က) Prepare For your journey. သင့်ရဲ့ ခရီးအတွက် ပြင်ဆင်ပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ဘဝခရီးမှာ ကိုယ်ဘာတွေ ရရှိခဲ့ပြီးလဲ၊ ဘာဘွဲ့တ်ဆိပ်တွေ ရရှိခဲ့လဲ။ ဘာတွေ လိုအပ်သေး လဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ အားသ်ချက်က ဘာလဲ? ကိုယ့်ရဲ့ အားနည်းချက်ကရော ဘာလဲ?
(ခ) Start for your journey. သင့်ရဲ့ ခရီးကို စတင်ပါ။
ခရီးတစ်ခု စတင်ဖို့ အတွက် knowledge လိုအပ်တယ်။ ကြိုးစားမှုဟာ အောင်မြင်မှုပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ ပန်းတိုင်ကို တိတိကျက်ထားပါ။ ရေတို၊ ရေရှည်ပန်းတိုင်တွေရှိဖို့ လိုအပ်တယ်။ အရှုံးကို လက်ခံရ တယ်။ စိတ်ပျက် အားငယ်နေချိန်မှာ အရှုံးကနေ သင်ယူ လေ့လာရတယ်။ အရှုံးဆိုတာ ကိုယ့်ဘဝ အတွက် စံကောင်း တစ်ခုပဲ။
(ဂ) Keep Moving forward for succed. အောင်မြင်မှုအတွက် အမြဲတမ်း ရွေ့နေပါစေ။
အနောက်တိုင်း စကားတစ်ခု ရှိပါတယ်။ အကယ်၍ သင်မပျံ သန်းနိုင်ရင် ပြေးသွားလိုက်ပါ။ အကယ်၍ သင်ပြေးမသွားနိုင်ရင် လမ်းလျှောက်သွားပါ။ အကယ်၍ သင်လမ်းမလျှောက်နိုင်ရင် တွား သွားလိုက်ပါ။ ဘာပဲလုပ်လုပ် အရှေ့ကိုတော့ ရွေ့နေပါစေတဲ့။
ဇွဲရှိပါ။ အချိန် နဲ့ ဉာဏ်ကို အသုံးချပါ။ အတတ်ပညာများကို သင်ယူပါ။ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိပါ။ အောင်မြင်မှုက လက်တစ်ကမ်းမှာပါ။
ဖုန်း- ဝ၉ ၂၅၀ ၄၈၂ ၃၇၃ ၊ ဝ၉ ၇၉၄ ၉၀ဝ ၁၇၄
ရိုးမအသံဂျာနယ် Vol.3, No.1, January 2017
You are here: Home သတင်း Article မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု